UPDATE: Qarax miino oo lagu dilay guddoomiyihii degmada Awdheegle & Xaaladda degmada oo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Qarax miino oo lagu dilay guddoomiyihii degmada Awdheegle & Xaaladda degmada...
UPDATE: Qarax miino oo lagu dilay guddoomiyihii degmada Awdheegle & Xaaladda degmada oo
Awdheegle (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya, in qarax miino lagu dilay guddoomiyihii degmada Awdheegle.
Qaraxan ayaa waxaa la galiyay wadada dhinaceeda, waxaana uu ka dhacay inta u dhaxeysa Degmada Awdheegle iyo deegaanka Sabiib.
Sidoo kale wararka waxa ay sheegayaan in Qaraxaasi ay ku dhaawacmeen Saddex ka mid ah Ciidamadii illaalada u ahaay Guddoomiyihii Degmada Awdheegle ee geeriyooday.
Allaha u naxriistee Maxamed Yarow ayaa mudo ka badan 6 sano wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Awdheegle, waxaana guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha hoose oo qaraxaasi ka hadlay uu u tacsiyadeeyey ehelada guddoomiyihii degmada Awdheegle.
Masuuliyiinta Gobolka Shabellaha hoose, ayaa waxa ay wadooyinka ku maraan xaalad adag, maadaama Al-Shabaab waddooyinka ay galiyaan Qaraxyo miino..
guddoomiyhii degmada Awdheegle oo qarax lagu dilay